Maxaa Keena siigada Yaase u badan in la siigeesto Ragga iyo Dumarka ­Daraasad | Arrimaha Bulshada
Home Bulshada Maxaa Keena siigada Yaase u badan in la siigeesto Ragga iyo Dumarka ­Daraasad
Maxaa Keena siigada Yaase u badan in la siigeesto Ragga iyo Dumarka ­Daraasad
Bulsha:- Jawaabta suaashii maxaa lagu siigeestaa 1;kasi Badan: Qofku marka uu kacsado oo dareen galmo oo degdeg ahi qabato, xaasna uu lahayn, waxay ku khasabtaa inuu siigaysto. Cabsida Zinnada:
Dadyow badan ayaa xilligay isku qabato mid uun inay sameeyaan, in ay sinnaystaan ama in ay siigaystaan; waxay door bidaan siigada. Dhaqan Balwo: Qaar iyagu way qabatimeen oo balwad ayey u noqotay, kacsi iyo kacsi la’aan waa kuwii sameeya, maba joogi karaan oo maba noolaan karaan hadaysan samayn.
Faa’iidada Siigaysiga? Waxey qofka ka ilaalisaa inuu ku dhaco zino Waxey qofka ka caawisaa inuu dejiyo dareemadiisa oo u raaxeeyo Waxey qofka ka difaacdaa saamaynta wayn ee shahwadu ku yeelan karto caafimaadkiisa Qarash yaraan, Uur la’i, ceeb la’i iyo Tijaabada ruuxu inuu biyo leeyahay.
Faa’iido Darrada Siigaysiga? Wajiga Koobaad Maskax qalal iyo Maan xidhan Xifdi la’aan iyo Faham yari Xawliga dhiiga oo daciifa Xubinta taranka oo jilicda Aragtida oo tamar daraysa Miisaanka jidhka oo is dhima Taahid iyo Gariir badan Dulqaad iyo Firfircooni yari Faalig iyo Qalal dhanka jidhka Hurdo badni iyo muuqaal xumo Maahsanaan iyo Jiljileec badaan Xiniinyaha oo barara oo cuslaada Himmada rabbaaniga oo yaraata Cuncun iyo Is xoqid badan Shakki badan iyo Cabsi caafimaad Murugo iyo Qowmamo badan Iyo qofku horay inuu u guursan waayo Wajiga Labaad Dhabar xanuun badan iyo kelyo xanuun saamayn wayn yeesha Nafaqada timaha oo dhammaata kadib daata Kacsi la’aan iyo biyo­bax degdeg ah Inay biyuhu (Manidu) soo dareeraan iyadoo kacsi aanay jirin “Semen leakage” Hab dhiska maskaxda oo khalkhala iyo xididdada oo hawlgabaDhibaato lagala kulmo joojinteeda. Wajiga Saddexaad Haddii uu shakhsigu caadaystay inuu gacantiisa ku biya­baxo oo sidaas raaxo ku helo, haduu joojin waayo waxay sababtaa, kolkuu guursado in gacanta xabiibtiisa ee jidhkiisa salaaxaysa ku kacsan waayo, ama ka heli waayo mid u dhigma kacsigiisii gacanta. Siigadu ma buuxin karto xattaa lama tartami karto galmada, maxaa yeelay, waxa keliya ee shaqaynaya waa gacanta iyo xubinta oo maskaxda farriin ka helaya, laakiin galmada waxaa si isku mida oo wadajira u shaqeeya hab dhismeed ka jidhka, hab dhismeed ka dareemada iyo hab dhismeed ka neerfayaasha oo farriin ka helaya maskaxda iyo murqaha. Xattaa si fudud oo mandaq ah oo la fahmi karo, halka guurku uu ka leeyahay istiimin iyo salaaxis, ama dhunkasho iyo hadalo macmacaan, siigadu maleh.
Eegga qofku siigaysanayo wuxuu dareemaa raaxo aan u bixiyey (Raaxo Kumeel gaadh) oo soconaysa qadar xaddidan (1­2) daqiiqo, hadhowna qofku wuu ka qowmameeyaa, wuxuu na ku fekeraa waxyaallo kale oo naftiisa dhibaato u keeni kara. Xilliga guurka iyo galmada, eegga ninku u tago naagtiisa biyaha ma ceshan karo oo durba wuu biyo­baxaa, wuxuuna ku biyo­baxaa qadar ka yar qadarka qofka caafimaad ka qabaa ku biyo­bixi karo (5­8)daqiiqo, inta badan qofkaasi wuxuu ku biyo­baxaa inta u dhaxaysa (0.5­1) daqiiqo.
Taasina, si degdeg ah waxay u sababtaa in haweentii ay qaado dareen ah niyad­jab iyo rajo­beel, kolka aynigeed ay la sheekeysatana waxayba sii qaadaa welwel iyo walaac; aakhirkana gurigaasi waa dumaa oo waliba ceeb ayaa lagu kala tagaa.
Qofka samaynaya siigada, eegga uu kacsado qalbigiisa ma joogo oo hawo sare ayuu ka fekarayaa, markuu dhammaysto howshiisa ayuu ogaadaa waxa uu sameeyey iyo fool xumida ay leedahay, kolkaas buu xusuustaa dembigeeda aakhiro iyo adduun, kadib ayuu isla hadlaa oo arkaa doqonnimadiisa inuu keligii isku raaxeeyey, maxaa ka nacasnimo badan in aad adigu isku galmootay oo isku raaxaysay? Dhallinyaro badan waxay aaminsan yihiin in xubinta taran ka ay ku weynaato, cilmi baadhis iyo daraasado lagu sameeyey waxey xaqiijiyeen inuu ku yaraado dhumuc iyo dhererba oo waliba aad u jilco.
Dhibaatooyin ka siigadu u keento xubinta taranka ninka waxaa kamida kolka haweenta uu u tago oo galmo uu la sameeyo, howshii oo socota inuu iska damo, ama xilliga biyaha uu tuuri lahaa hawlgabo; ciniinnimadaasi waxay caloolyow ku beertaa haweenta oo runtii aad iyo aad uga xanaaqda oo xattaa daraasaddu sheegaysaa inay ka qaadi karto waali.